Ny marina amin'ny fitsarana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Ny marina amin'ny fitsarana
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny New York Chapter an'ny The Public Relation Society of America (PRSA) dia nodinihina vao haingana FAHAMARINANA ary apetraho amin'ny fitsarana. Ny tontonana dia nahitana ireo matihanina amin'ny haino aman-jery, marketing ary fanabeazana izay naneho ny heviny sy ny zavatra niainany mikasika ny fanaony sy ny traikefany eo amin'ny sehatry ny fifandraisana amin'ny daholobe.
Na dia nisy aza ny marimaritra iraisana fa ny fanehoana ny marina dia matetika safidy tsara kokoa noho ny manolotra zavatra hafa, nanontaniana ny mpanatrika ny atrikasa: “Efa nandainga ve ianao?” Fahatelo farafaharatsiny amin'ny mpihaino dia nanaiky fa nanao fanambarana tsy marina tanteraka.
Ny Ivotoerana ho an'ny fifandraisana amin'ny daholobe dia nanao fihaonambe toy izany tamin'ny taona 2018, nijery Fahapotehan'ny fahamarinana ary ny fironana hampifangaro ny zava-misy amin'ny tantara foronina. Ny hetsika dia nijery ireo matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe sy ny andraikiny amin'ny maha "mpamorona sy mpanaparitaka vaovao izay miankina amin'ny fahatokisana ny tontolon'ny fampahalalam-baovao." Ny marimaritra iraisana? Ny PR dia mitana andraikitra amin'ny fanambarana ny marina ary Tina McCorkindale, filoha sady tale jeneralin'ity andrim-panjakana ity dia nanambara fa, "… raha mpisehatra ratsy kosa dia ampahany kely amin'ny asa manontolo… heveriko fa tompon'andraikitra amin'ny famotehana ny fahamarinana ny PR." Norris West, talen'ny fifandraisana stratejika, The Annie E. Casey Foundation, dia nahita fa, "miafara miafina ny fahamarinana izy ireo amin'ny alàlan'ny fanapahan-kevitra kely…" miaraka amin'ny valiny izay manaron-tena ny zava-misy.
Raha nidina tamin'ny lafiny etika i McCorkindale dia nanapa-kevitra fa amin'ny faran'ny andro, "… ny tsy fahombiazana amin'ny fanomezana zava-misy, ny tena angon-drakitra dia tsy vitan'ny etika fotsiny, fa manimba ny fahatokisan-tena amin'ny matihanina… mety ho very mora foana ny fahatokisana."
Miaina ao amin'ny tontolon'ny trompetra
Mihevitra ny olona sasany fa i Donald Trump no anton-javatra lehibe nandefasana sy nampiroborobo ny nofinofy, ny teoria fikomiana ary ny lainga; na izany aza, hitan'i Kurt Andersen (mpanoratra, Fantasyland: How American American Haywire) fa niaraka taminay ny nofinofy hatramin'ny fiandohan'ny repoblika ary ny Amerikanina dia vonona ny hino izay tian'izy ireo hino nandritra ny taonjato maro.
Misy fahasamihafana ve?
Raha ny filazan'i Larry Walsh (ilay 2112group.com) dia misy fahasamihafana eo amin'ny marina sy ny zava-misy. Hitan'i Walsh fa ny zava-misy dia tsy azo ihodivirana, miorina amin'ny fikarohana empiraika ary isaina. Ny zava-misy dia azo hamarinina, voamarina ary ara-tantara.
Ny fahamarinana dia mety misy ny zava-misy nefa azo ianteherana koa amin'ny finoana (arak'i Walsh). Ny olona sasany dia maniry ny marina noho ny zava-misy satria mahazo aina kokoa amin'ny vaovao izy ireo, mora takarina ary mety maneho ny fiheverany ny zava-misy aza.
Hitan'i Walsh fa na dia tsy azo iadian-kevitra aza ny zava-misy; azo ekena ny fahamarinana. Ilay mpahay toekarena Charles Wheelan (Toe-karena Naked; statistika mitanjaka) dia nahita fa, “… mora ny mandainga amin'ny statistika, saingy sarotra ny milaza ny marina raha tsy misy azy ireo.”
Kellyanne Conway, mpanolotsaina amerikana an'ny filoha Trump dia nanambara, nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'ny Meet the Press (22 Janoary 2017), rehefa noterena nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin'i Chuck Todd, nanazava ny antony nahafahan'ny sekretera ny gazety Sean Spicer "nilaza lainga azo porofoina", nilaza fa i Spicer dia manome “zava-misy hafa.” Tao anatin'ny fiezahana hiaro ny fanambaràny dia nanapa-kevitra i Conway fa ny "zava-misy hafa" dia "zava-misy fanampiny ary fampahalalana hafa."
Afaka mahita ny marina ve isika?
Amin'ny alàlan'ny fidirana manerantany amin'ny fampahalalana tsy manam-petra dia tokony ho afaka hamaky na handre ny marina isika; na izany aza, hoy ny Rand Institute, miaina fatiantoka fahamarinana amin'ny fiainam-bahoaka amerikana izahay. Jennifer Kavanagh sy Michael D. Rich (2018) mpanoratra ny Truth Decay, dia nanapa-kevitra fa misy fironana efatra hodinihina:
Ny zava-misy dia tsy raisina ho FAHAMARINANA intsony; misy aza ny tsy fitovian-kevitra momba ny zava-misy. Mametra-panontaniana ny angona, ao anatin'izany ny fomba fanangonana, famakafakana ary fandikana azy.
Saika tsy hita intsony ny tsipika misy eo amin'ny hevitra sy ny zava-misy.
Ny hevitra sy ny zavatra niainany manokana dia manolo ny zava-misy sy ny marina.
Tsy atokisana intsony ny loharanom-pahalalana hajaina teo aloha.
Ari-Elmeri Hyvonen (2018, University of Jyvaskyla, Finlande) dia nanapa-kevitra fa i Donald Trump dia naneho ny fandavana sy ny fankahalany tanteraka ny zava-misy marina. Araka ny soso-kevitr'i William Connolly (2017), Trump dia nandray ny fiheverana ny "lainga lehibe" fantatsika tamin'ny fampielezan-kevitra nasionaly sosialista fa Adolf Hitler, tao Mein Kampf, izay nanamarika fa ny vahoaka betsaka dia mora voafitaky lainga lehibe kokoa noho ny kely (Hitler, 1943, 231-232). Ny "lainga lehibe" dia miasa satria olona na olona manana fahefana no manambara azy; manintona ny fihetsem-po fa tsy misaina; manamafy ny fitongilanana voajanahary (na tsy fantatra) amin'ny mpihaino; ary averimberina ary averimberina ary averimberina.
Hyvonen koa dia miresaka momba ny foto-kevitry ny Careless Speech izay "tsy misy fikarakarana." Ity karazana kabary ity dia tsy misy ifandraisany amin'ny fahamarinana, manondro ny tsy fanekena hirotsaka amin'ny fomba fijery hafa, tsy hanaiky ny zava-misy fa misy vokany ny teny ary misy dikany ny teny. Io karazan-kabary io dia miteraka fisalasalana ihany: tena ilaina ve ny teny avoaka? Ny finoana dia izay voalaza rehetra dia tsy azo lazaina.
Lainga sa BS?
Harry Frankfurt, ao amin'ny bokiny On Bullshit (Princeton University) dia taratry ny foto-kevitry ny "bullshit" mahita fa ilay "bullshitter" dia tsy miraharaha tanteraka ny tena misy. Ny mpandainga dia manandrana manafina ny marina, fa ny mpibolisatra kosa tsy miraharaha ny zava-kendreny manokana.
Hitan'i Hyvonen fa “… ny teny tsy mitandrina dia tsy miorina amin'ny fanambarana poakaty natao tsara izay toa tsara fa saika tsy misy dikany. Raha tokony hiezaka handresy lahatra, ny kabary tsy fitandremana dia mitady hamorona fikorontanana ary hampitsahatra ny adihevitra demokratika. ”
Manafina ve ny marina?
Kavanagh sy Rich dia nanapa-kevitra fa misy fahasimbana amin'ny fahamarinana noho ny fahitana, ny fitomboan'ny media sosialy sy ny vavahadin-tserasera hafa, miaraka amin'ny tsy fahafahan'ny mpanjifa mifanaraka amin'ny habetsaky ny fampahalalana azo zahana, ny fanovana ny loharanom-baovao, ary ny fisaratsarahana eo amin'ny politika sy ny fiaraha-monina.
Rehefa manalavitra ny zava-misy sy ny angona ilaina isika (raha tsy manakiana) amin'ny adihevitra politika sy ny fanapaha-kevitra politika, dia misy fihenan'ny kabary sivily satria tsy afaka manaiky hanaiky (na tsy miombon-kevitra). Ny tsy fisian'ny fifanarahana amin'ny zava-misy dia manalefaka ihany koa ireo andrim-panjakana ara-kolontsaina, diplaomatika ary toekarena.
Ny haino aman-jery dia nifindra avy amin'ny fianteherana amin'ny zava-misy sy ny fanaovana tatitra an-gazety sarotra amin'ny fiankinan-doha amin'ireo mpaneho hevitra sy hevitra noho ny fetran'ny tetibola sy ny tsena kendrena. Izany dia manampy amin'ny mélange ny zava-misy sy ny hevitra, mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny fahalovana.
Fikambanana akademika sy fikambanana miorina amin'ny fikarohana, miatrika ny fangatahana famoahana (matetika voataonan'ireo mpanohana orinasa na fandaharam-potoana hafa mifototra amin'ny famatsiam-bola) dia matetika mitarika famoahana fehin-kevitra mitanila, diso hevitra na diso, mamaly ny filan'ny mpanohana ary very ny toerana misy ny tombotsoan'ny mpanjifa.
Kavanagh sy Rich dia nanondro ny mpanao politika sy ny solontenan'ny governemanta, ao anatin'izany ny masoivohon'ny federaly, ny kongresy, ny mpitondra fanjakana sy ny eo an-toerana ary ny andrim-panjakana mpanao lalàna izay manana anton-diany mamily ny vaovao ka hatramin'ny sarotra ny mampisaraka ny zava-misy amin'ny tantara foronina. Ny mpitondra tenin'ny vehivavy sy ny vehivavy iraisam-pirenena dia mampanjavozavo ny elanelana misy eo amin'ny hevitra sy ny zava-misy ary manampy ny fitaoman'izy ireo amin'ny fampifangaroana ny zavatra niainany manokana sy ny heviny ary nahatonga azy ho zava-dehibe kokoa noho ny zava-misy.
Mamorona fifangaroana ny vaovao amin'ny fahita lavitra
Eritrereto ireo fandaharana amin'ny fahitalavitra natolotr'i Rachel Maddow, sy Sean Hannity, izay misy ny fifangaroan'ny zava-misy sy ny hevitra nefa tsy misy tsipika mazava manasaraka ny iray. Ny habetsaky ny fampahalalana avy amin'ny fahitalavitra, media sosialy, magazine vaovao an-tserasera ary bilaogera dia miteraka tsy fahampian'ny fampahalalana izay mandreraka ny fandevonan-kanina, mainka ve ny fisarahana amin'ny zava-misy sy ny lainga ary ny BS.
Na ny ankizy aza mikorontana
Ny fandinihana nataon'i Stanford tamin'ny 2016 tamin'ny mpianatra ambaratonga faharoa dia nahita fa tsy afaka nanavaka ny maha-marina ny fampahalalana an-tserasera izy ireo, nanasaraka ny tena tantara tamin'ny vaovao sandoka. Tsy afaka nanavaka ny dokam-barotra sy ny votoatiny notohanana koa izy ireo na nanombatombana ny fitongilanana loharanom-baovao iray rehefa namaritra raha marina ny fanambarana na ny hevitra.
Manantena i Randy
Ny fikarohana / tatitra momba an'i Rand dia manantena fa amin'ny alàlan'ny tatitra momba ny fanadihadiana dia mety hivoatra ny tontolon'ny fampahalalana. Manome sosokevitra ihany koa izy ireo fa ny fampiasana tahiry tsara kokoa sy ny fanovana ny politikam-panjakana dia handrisika ny fitomboan'ny fandraisana andraikitra sy ny mangarahara. Manoro hevitra ihany koa izy ireo ny amin'ny tokony hanovana ireo fantsom-pifandraisana momba ny angon-drakitra sy ny zava-misy - maneho ny angon-drakitra amin'ny fomba tsy mandrahona sy ny rafitra "lohan-doha", manaitra ny mpanjifa fa ny fampahalalana novakiany na henony dia mety hosokaina na hosoka.
Fifandraisan'ny besinimaro - ny fahamarinana ve?
Raha ny filazan'i Mark Weiner, Chief Officer of Insights, Cision ary CEO, Prime Research America, ny fifandraisana amin'ny besinimaro dia momba ny fahamarinana sy ny zava-misy. Tao amin'ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny Journal of Mass Media Ethics, ny matihanina PR dia notendrena hiatrika ny fahamarinana ho tombontsoan'ny fikambanana. Ny fifantohan'ny PR amin'ny fahamarinana sy ny mangarahara no mahatonga ny asa ho ampahany lehibe amin'ny c-suite.
Araka ny filazan'i Anthony D'Angelo, mpampianatra momba ny fampiharana amin'ny fifandraisana amin'ny daholobe, oniversite Syracuse: “Tsy handainga na hamitaka izahay. Milalao ara-drariny izahay… tsy manao zavatra tsy tianay hotaterin'ny fampahalalam-baovao. ” Ny matihanina PR dia tompon'andraikitra amin'ny fananganana fifampitokisana amin'ireo mpanjifa, mpampiasa ary ny fampahalalam-baovao.
Araka ny voalazan'i Leslie Gottlieb, filoha NY Chapter, PRSA, "Zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny asa aman-draharahantsika manohana ny fotopoto-pitsipika fototra sy ny adidintsika amin'ny fanompoana ny tombontsoam-bahoaka."
Program. Fahamarinana amin'ny fitsapana: ny anjara asan'ny fahamarinana ao amin'ny fiarahamonina ankehitriny
Moderator, Emmanuel Tchividjian, The Markus Gabriel Group; Ny filoha teo aloha sy ny manamboninahitra etika, PRSA-NY
Dr. Andrea Bonime-Blanc, Esq., CEO, mpanorina, GEC Risk Advisory; Mpiara-mitarika ny birao NACD; Mpanoratra, Manjombona amin'ny fipoahana: Ahoana no hanovan'ny mpitondra ny risika ho faharetana sy soatoavina & James E. Lukaszewski, filoham-pirenena, fizarana vondrona Lukaszewski, Risdall Marketing Group; Mpanoratra, The Decency Code; Mpikambana, Hall of Fame momba ny fifandraisana amin'ny daholobe Rowan University
TJ Elliott, Broker fahalalana, Serivisy fitsapana fanabeazana; Mpanoratra mpiara-miasa, fanapahana ADN; mpikaroka teo aloha, NYU, Mercy College ary Columbia University & Michael Schubert, Chief Innovation Officer, Ruder Finn - nisolo tena an'i Navartis, Pfizer, Citi, Pepsi Co, Mondelez, ny White House ary ny United Nations